ဆောငျးတှငျးဆို အေးစိမျ့နတေဲ့ ဒီလိုခွံကွီးကို ဝယျနိုငျဖို့ ဇနီးမောငျနှံ ၂ ဦး ကွိုးစားခဲ့ရပုံတှေ ပွောပွလာတဲ့ ဆုပနျထှာ – Askstyle
ဆောငျးတှငျးဆို အေးစိမျ့နတေဲ့ ဒီလိုခွံကွီးကို ဝယျနိုငျဖို့ ဇနီးမောငျနှံ ၂ ဦး ကွိုးစားခဲ့ရပုံတှေ ပွောပွလာတဲ့ ဆုပနျထှာ
သရုပ်ဆောင် ဆုပန်ထွာဟာ သားလေး Roar Roar ကိုမွေးဖွားပြီးနောက် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ပြုပြီး အိမ်ရှင်မကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် ရှိနေပေမယ့် သူမရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်သော အနုပညာအလုပ်တွေကိုတော့ အလှမ်းမကွာအောင် အဆက်မပြတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာ စီးပွားရေးတွေကိုလည်း လုပ်ကိုင်နေပါသေးတယ်။
ဆုပန်ထွာဟာ ဘာသာတရားကို ကိုင်းရှိုင်းရိုသေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သိပ်မကြာသေးခင်အချိန်ကမှ အမေရိကားမှာ ၂ လကြာသွားရောက်နေထိုင်ပြီးပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်မှာနေထိုင်ခွင့် Green Card ကိုလည်း ဗောဓိညောင် (၁၀) ပင်အဓိဌာန်ဝင်တာကြောင့် ရရှိခဲ့တယ်လို့ သူမက ဆိုပါသေးတယ်။
ဆုပန်ထွာတစ်ယောက်ကတော့ ယခုလို ဆောင်းရာသီဝင်လာလို့ အအေးပိုလာတဲ့အချိန်မှာ အေးစိမ့်နေတဲ့ သူမရဲ့ ခြံအကြောင်းကိုပြောပြလာပါတယ်။ ဒီလိုခြံကြီးတစ်ခြံကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိဖို့ သူမတို့ ဇနီးမောင်နှံ (၂) ဦး ဘယ်လိုရုန်းကန်ကြိုးစားခဲ့လဲဆိုတာကိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Dinner with family at home. Cold winter nights!ဆောင်းတွင်းခြံထဲမှာအေးစိမ့်နေတာပဲ။စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာရင်ထဲထိရှင်းပြီးအေးနေတာခံစားမိပါရဲ့။ဒီခြံကြီးဝယ်နိုင်ဖို့ လင်မယားနှစ်ယောက် သူလည်းအလုပ်‌တွေတအားကြိုးစား၊ ကိုယ်လည်းအလုပ်မှန်သမျှမနားမနေကြိုးစားလုပ်ရင်း ပိုက်ဆံတွေကုတ်ကပ်ဆု၊ ကြိုးစားဝယ်ခဲ့ရတာလေး သတိရတယ်။ဘဝဆိုတာလွယ်လွယ်ကျော်ဖြတ်ခွင့်ရတာမှ မဟုတ်ပဲ။နှစ်ယောက်သားကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ကြိုးစားရပ်တည်ကြရင်း၊ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတာမို့ ….ဘဝမှာနေထိုင်ခွင့်ကျတော့ကိုယ့်စိတ်ထဲ ပိုအရသာရှိလှပါတယ်။
ဆုပန်ထွာဟာ မကြာသေးခင်လပိုင်းတွေကပဲ ပြင်ဦးလွင်မှာရှိတဲ့ ခြံတစ်ခြံကိုလည်း သွားရောက်ဝယ်ယူခဲ့ပါသေးတယ်။ သူမတို့လို ပျော်ရွှင်ပြီးအောင်မြင်တဲ့မိသားစုကို ပရိသတ်ကြီးကလည်း အားကျမယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ ဘဝဆိုတာ လွယ်လွယ်ကျော်ဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုလည်း ပန်ပန်က ပြောပြထားတာကြောင့် မိသားစုအားလုံး ပန်ပန်တို့မိသားစုတွေလို ကြိုးစားကြရအောင်နော်။
သရုပျဆောငျ ဆုပနျထှာဟာ သားလေး Roar Roar ကိုမှေးဖှားပွီးနောကျ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတာဖွဈပါတယျ။
အိမျထောငျပွုပွီး အိမျရှငျမကောငျးတဈဦးအဖွဈ ရှိနပေမေယျ့ သူမရဲ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးဖွဈသော အနုပညာအလုပျတှကေိုတော့ အလှမျးမကှာအောငျ အဆကျမပွတျလုပျနတောဖွဈပါတယျ။ တဈဖကျမှာ စီးပှားရေးတှကေိုလညျး လုပျကိုငျနပေါသေးတယျ။
ဆုပနျထှာဟာ ဘာသာတရားကို ကိုငျးရှိုငျးရိုသသေူတဈဦးဖွဈပွီး သိပျမကွာသေးခငျအခြိနျကမှ အမရေိကားမှာ ၂ လကွာသှားရောကျနထေိုငျပွီးပွနျလညျရောကျရှိလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အမရေိကနျမှာနထေိုငျခှငျ့ Green Card ကိုလညျး ဗောဓိညောငျ (၁၀) ပငျအဓိဌာနျဝငျတာကွောငျ့ ရရှိခဲ့တယျလို့ သူမက ဆိုပါသေးတယျ။
ဆုပနျထှာတဈယောကျကတော့ ယခုလို ဆောငျးရာသီဝငျလာလို့ အအေးပိုလာတဲ့အခြိနျမှာ အေးစိမျ့နတေဲ့ သူမရဲ့ ခွံအကွောငျးကိုပွောပွလာပါတယျ။ ဒီလိုခွံကွီးတဈခွံကိုပိုငျဆိုငျရရှိဖို့ သူမတို့ ဇနီးမောငျနှံ (၂) ဦး ဘယျလိုရုနျးကနျကွိုးစားခဲ့လဲဆိုတာကိုပွောပွလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Dinner with family at home. Cold winter nights!ဆောငျးတှငျးခွံထဲမှာအေးစိမျ့နတောပဲ။စိတျခမျြးသာလိုကျတာရငျထဲထိရှငျးပွီးအေးနတောခံစားမိပါရဲ့။ဒီခွံကွီးဝယျနိုငျဖို့ လငျမယားနှဈယောကျ သူလညျးအလုပျ‌တှတေအားကွိုးစား၊ ကိုယျလညျးအလုပျမှနျသမြှမနားမနကွေိုးစားလုပျရငျး ပိုကျဆံတှကေုတျကပျဆု၊ ကွိုးစားဝယျခဲ့ရတာလေး သတိရတယျ။ဘဝဆိုတာလှယျလှယျကြျောဖွတျခှငျ့ရတာမှ မဟုတျပဲ။နှဈယောကျသားကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျကွိုးစားရပျတညျကွရငျး၊ရငျဆိုငျခဲ့ကွရတာမို့ ….ဘဝမှာနထေိုငျခှငျ့ကတြော့ကိုယျ့စိတျထဲ ပိုအရသာရှိလှပါတယျ။
ဆုပနျထှာဟာ မကွာသေးခငျလပိုငျးတှကေပဲ ပွငျဦးလှငျမှာရှိတဲ့ ခွံတဈခွံကိုလညျး သှားရောကျဝယျယူခဲ့ပါသေးတယျ။ သူမတို့လို ပြျောရှငျပွီးအောငျမွငျတဲ့မိသားစုကို ပရိသတျကွီးကလညျး အားကမြယျလို့ ထငျပါတယျနျော။ ဘဝဆိုတာ လှယျလှယျကြျောဖွတျလို့မရဘူးဆိုတာကိုလညျး ပနျပနျက ပွောပွထားတာကွောငျ့ မိသားစုအားလုံး ပနျပနျတို့မိသားစုတှလေို ကွိုးစားကွရအောငျနျော။